Paul Pogba oo sharraxay sababta uu u xirtay Maaliyadda Kooxda Juventus markii uu tababaranayay! – Gool FM
Paul Pogba oo sharraxay sababta uu u xirtay Maaliyadda Kooxda Juventus markii uu tababaranayay!
Haaruun March 19, 2020
(Manchester) 19 Mar 2020. Laacibka khadka dhexe kaga ciyaara kooxda Manchester United ee Paul Pogba ayaa ka careysiiyay taageerayaasha kooxdiisa kaddib makii uu bartiisa Instagram-ka soo geliyay muuqaal uu gurigiisa ku tababaranaayay isagoo xiran maaliyadda kooxda Juventus.
Horyaalka Premier League-ga ayaa ku jira fasax iyo xannibaad kaddib cabsi fara badan oo laga qabo caabuqa Coronavirus, sidaas darteed kubbad qaabeeyahan ayaa gurigiisa ku sameynayay tababar gaar ah, isagoo bartiisa Instagram-ka uu geliyay muuqaal kooban xilli uu xirnaa maaliyadda Bianconeri.
Pogba oo hadda ka soo kabanaya dhaawac uu garoomada kaga maqnaa muddooyinkii u dambeeyay ayaa si aad ah loola xiriiriyay ku laabashada kooxdiisii hore ee Juve iyo inuu ka tago garoonka Old Trafford.
Balse arrinta ka careysiisay taageerayaasha Man United ayaa ah inuu xirtay maaliyadda kooxda la la xiriirinayo, xilli mustaqbalkiisa Kooxda reer England uu mugdi badan ku jiro.
Ku guuleystaha Koobkii Aduunka 2018 ayaa sharraxay sababtii uu u xirtay maaliyadda Juventus, waxaana uu tilmaamay inuu taageere ugu muujinayay saaxiibkiisa Blaise Matuidi oo uu haleelay caabuqa Coronavirus.
“Waxaan taageere u muujineynaa saaxiibbadeen Juventus iyo Sampdoria @ blaisematuidiofficiel, @albinekdal iyo dhammaan xirfadleyda ciyaaraha ee dunida daafaheeda jooga kuwaasoo wajahaya xilliyo adag. Noqda kuwa xoog badan, #JoogaGuriga nabadna ahaada.” ayuu Pogba ku soo qoray bartiisa Instagram-ka.
🇬🇧 Supporting our Juventus and Sampdoria friends @blaisematuidiofficiel, @albinekdal and all athletes and people around the world who are facing this difficult moment.⠀ ⠀ Be strong, #StayAtHome and be safe 💪🏾!⠀⠀ ⠀ New training camp is called …⠀⠀ Quarantine PP Arena, open 24/7! 🏋🏾‍♂⠀⠀ Having fun working at home 🏠 with my brother @victorlindelof!⠀⠀ ⠀⠀ (I know the cheeky ones will talk about the Juventus jersey 😏 I’m just supporting my friends … that’s all, nothing more 😁).⠀ ⠀ ⠀ 🇮🇹 A sostegno degli amici di Juventus e Sampdoria @blaisematuidiofficiel e @albinekdal e di tutti gli atleti e le persone del mondo⠀ ⠀ Siate forti, #StayAtHome e fate attenzione 💪🏾⠀ ⠀ Il nuovo campo di allenamento si chiama… ⠀ Quarantena PP Arena, aperto 24 ore su 24 🏋🏾‍♀⠀ Mi diverto ad allenarmi a casa 🏠 con il mio amico @victorlindelof!⠀ ⠀ (So che qualche malizioso parlerà del fatto che indosso la maglia della Juventus 😏, ma lo faccio solo per dare un segno di supporto al mio amico, non c’è nessun’altra ragione 😁).
Kooxda Manchester United United oo dhageysanaysa dalabyada u imaanaya Paul Pogba… (Imise Milyan ayay ku fasaxaysaa?)
Wax ka ogow 10-ka laacib ee ugu qaalisan xilligan… (Mbappe oo hooggaanka haya, Messi oo 8-aad ku jira & Nerymar oo 3-aad fadhiya!)